Anisan’ireo mpanafika “cash-point”: dimilahy voasambotry ny polisin’ny BC teny Sabotsy Namehana | NewsMada
Anisan’ireo mpanafika “cash-point”: dimilahy voasambotry ny polisin’ny BC teny Sabotsy Namehana
Voasambotry ny polisin’ny Brigade criminelle, sakelika fahefatra, sy ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’i Sabotsy Namehana, ny alarobia teo dimilahy nikononkonona fanafihana teny an-toerana.
Raha ny nambaran’ny polisim-pirenena, tao amina toeram-pisotroana iray eny an-toerana ireo olon-dratsy no tra-tehaka izy ireo tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany. Fantatra fa mbola nanohitra sy nikasa handositra anefa izy ireo, tamin’izany. Nahitana basy poleta iray sy “big boss” iray teny amin’ireo olon-dratsy, nandritra ny fisavana azy ireo, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Taorian’ny fahatrarana ireo jiolahy, nohadihadina avy hatrany izy ireo ary fantatra tamin’izany fa lehilahy iray mpaka “versement de credit”-ana tambajotra telefonika miasa eny Sabotsy Namehana no saika horobain’ireo jiolahy, tamin’io fotoana io. Niaiky ihany koa izy ireo fa isan’ireo namaky tranombarotra sy “cash point” eto an-dRenivohitra, hoy ny polisy ary mbola nohamafisin’ny ben’ny Tanàna ao an-toerana izany. Isan’izany ny fanafihana mitam-basy izay nataon’izy ireo tetsy 67ha, ny alatsinainy teo, hoy ny loharanom-baovao. Nandamoka anefa izany satria tonga ara-potoana ny polisy avy ao an-toerana.
Voalaza ihany koa fa izy ireo no nanao ny fanafihana mitam-basy tao amina tokantrano iray tetsy Faravohitra, ny alin’ny 31 janoary lasa teo izay nahaverezana vola sy entana maro mitentina 6 tapitrisa Ar mahery. Fantatra fa mbola mitohy ny fikarohana mahakasika ny toerana rehetra nanaovan’ireo jiolahy ny asa ratsiny. Aorian’ny fanadihadiana, hatolotra ny fitsarana izy dimy lahy ireo.